Namoota - Ethiopia
Waxabajjii 10, 2010
Uummata fi Adaa
Itoophiya kan wamamittuu adaa bonsa kan qabduu sababa afaan saddeeti fi sabaf sablammii fi akka bayyee ,yoo bayyee hintanee, adaa gara gara kan qabiduudha..
Amaaran kan argamuu jidduugaleessa lafa olka'insa plate'au Itoophiya fi kan hundefamitte uummata ijoo bulichinsa anaa Gondar,Gojjam,nannole muta'ee showa fi wollo kan ta'an nannolee bulchinsa Amaraa jedhama. Oromonis nannolee gudda kan qabiduu biyyadha.Isaanis horsistoota fi uummata qonan bultoota kan qabidduu fi bayyinan jiddugaleessa fi kiba-lixa Itoophiyatidha. Namooni nannolee Nilo-saharan jiratan gosa nannole lixa biyya ka'ee hanga dangaa Eritira kasee hanga garba Turkana. Essattuu nannoo biyya lakkofisan xiqoo kan ta'e hawaasoota kan adaawwan ,luugaawwan fi dhaloota darbanirra kan dhufee barsifata walkan qabatuu qunamittii gara gara irra Itoophiyan seena dheera fi bekama kan qabidduu fi,akka namoota hunduumattuu kan biyyaa,akka amanita isannittii kan akka amanita Orthodox ,amantta Muslimoota,protestanitti …kan kana fakkatuu amanta gara gara warrii qaban kan irra jiratanidha.
Adaa namoota kun bayyee bayyee kan barbachisuu yeroo amma kana miciraan Itoophiya .Artistoota fi namoota oguumma arka hirmanna waliigalteedhan adaa biyya sanii fi guddina hawaasattidha. Gara caluman maaglan hundinuu adaa gamta hawwisoo naanna'aa kan hhundefaman sirbitoota,walaloo fi baresitoota,fi adaa mata isaan warra qaban fi akka adaa saniit sirbaa gara gara humudhan sirbuu fi iddoo murta'ee akka immurii isanit.
Itoophiyan biyya adaa mata ishee kan qabiduu ,adaa gara gara kan mata ishee kan qabidudha.Akkasumas umama kan jalqaba gara gara ijoo gosa giddutti gologaa'aa kan jarraa wwan ,yoobar kuumee ,walfudhaf heruuma,kan mata sanii fi kan isaanii qofaa kan ta'e duwaadha.
Gosa gara gara kan argamuu ,luuga gara gara niddubatuu biyya keessat,kana kessa gara afaan saddetami-sadii kann dubatamuu yoota'uu,looga 200 kan ta'uu niqabiddii.Kunisi garee iddoo afuritti kan hiramuudha:isanis kessa Semitiki, Cushitik, Omootik, fi Niloo-Saaharan jedhamuu.
Afaanoota Semitik kan Itoophiya Afaan Hibriw fi Arabiki kaanan walittihufenya niqaba.Afaanooni Itoophiya gosa Ge'izi kan durii irra kan dhufe ,kan mootuuma Aksumiti,innis Afaan kan biyya litiraturii gara nonnoo jiddugaleessa jara –kudhasagalii,akkasumas yeroo amma kana kan mannii kadhata itti tajaajilamudha.
Afaan semitik Itoophiya kun yerohara kana bayyi'nan kan dubbatamuu kabaa fi jidduugalessa biyya Itoophiyatidha. Afaan bayye barbachisa kan ta'ee kara kabaatiin afaan Tigirnya yota'uu,innis kan itti fayyadaman namoota nanoolee Tigira'itdha.